व्यवस्थापन ज्ञान : करियर विकासमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी व्यवस्थापन ज्ञान : करियर विकासमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग
on: १७ बैशाख २०७५, सोमबार ०६:२४ रोजगारी
सामाजिक सञ्जालले कार्यालयको दैनिक कामबाट तपाईंको ध्यान भङ्ग गराउन सक्छ । तर, यसलाई सही तरीकाले प्रयोग गर्ने हो भने यो तपाईंको करियर विकासमा सहयोगी साबित हुन सक्छ । यसको मतलब सामाजिक सञ्जाल लिङ्क्डइनमा आफ्नो रिज्युम हाल्ने मात्रै वा आफ्ना हाकिमको रुचि भएको विषयलाई आफ्नो फेसबूकमा ‘लाइक’ गर्ने मात्र होइन । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रोफाइललाई व्यावसायिक देखाउने त ‘पहिलो कदम’मात्र हो भन्छ सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने प्लेटफर्म हूटसुइट । तर, यसको माध्यमबाट आफ्नो ‘व्यावसायिक ब्राण्ड’ निर्माण गर्न सक्नुभयो भने तपाईं पृथक् देखिनुहुन्छ । यो उपलब्धि केही सरल कदमलाई पछ्याएर पाउन सकिने हूटसुइटमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि वृद्धि र मार्केटिङका वरिष्ठ निर्देशक रोजर ग्राहमले बताएका छन् ।
१. विचाराधीन नेतृत्व
सर्वप्रथम त तपाईं कुन व्यावसायिक महत्त्वको विशिष्ट विषयमा आफ्नो पहिचान बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसको छनोट गर्नुपर्छ । यो भनेको त्यस्तो विषय हुनुपर्छ जसमा तपाईंको विशेषज्ञता छ । यसको पहिचान भइसकेपछि त्यसलाई देखाउन आवश्यक सामग्री तयार गर्ने र प्रस्तुत गर्ने काम थाल्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित व्यावसायिक क्षेत्रका नेताहरूसँग लगातार वार्ता गर्ने र त्यो व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्न सक्ने जल्दाबल्दा विषयमा आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । यसले आफ्नो विषयगत क्षेत्रबारे थप ज्ञान त दिन्छ नै, साथै यसले तपाईंलाई आफ्ना समकक्षीभन्दा केही पृथक् पनि देखाउँछ ।
२. कण्टेण्ट क्युरेशन :
दोस्रोमा, तपाईंलाई अरू मानिसले सजिलैसँग फलो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्ना पोष्टहरू नियमित रूपमा शेयर गर्नुपर्छ, ताकि अन्य मानिसले त्यो कहिले आउने हो भन्ने पहिल्यै अपेक्षा गर्न सकून् । तर, तपाईंले पोष्टको बाढी भने ल्याउनु हुँदैन । यस्ता पोष्टहरू चाख लाग्दा समाचार, लेख हुन सक्छन्, ब्रेकिङ न्यूजबारे आफ्नो विचार हुन सक्छ र वैचारिक नेतृत्व दिने खालका आफैंले लेखेका पनि हुन सक्छन् ।
३. प्रवर्द्धन :
आफ्नो काम वा लेख–रचनाको प्रचारप्रसार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सकेसम्म आफ्नो कामलाई एकभन्दा बढी सामाजिक सञ्चार प्लेटफर्ममा शेयर गर्नुपर्छ । यसले विभिन्न नेटवर्कमा भएका मानिसबीच तपाईंको पहिचान विस्तार हुन्छ । यदि तपाईंको प्रस्तुति/लेख तपाईंको संस्थाको धारणासँग मेल खायो भने उसले पनि त्यसलाई शेयर गरिदिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल भनेकै सामाजिक हुनका लागि हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अरू मानिसले गरेको पोष्टमा पनि आफ्नो संलग्नता बढाउनुपर्छ, उनीहरूका वैचारिक नेतृत्वदायी लेखहरू शेयर गरिदिनुहोस् र आफूसँग आबद्ध भएकाको पोष्टबारे प्रतिक्रिया दिन पनि नहिच्किचाउनुहोस् ।